ရှန်ဒေါင်း သာ. ကောင်း၏မော်တော် Co. , Ltd မှ - သည် သာ. ကောင်း၏အကြောင်း
ပိုကောင်းတဲ့မော်တော်တစ်အစိုးရပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသောရှန်ဒေါင်း Fada Group မှကော်ပိုရေးရှင်း၏မော်တော်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကနေတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ရှန်ဒေါင်း Fada Group မှကော်ပိုရေးရှင်းအီလက်ထရောနစ်ပန်ကာနှင့်တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာလေဟာနယ်-သန့်စင်ထုတ်လုပ်သူများ၏ရှေ့ဆောင်ခဲ့သော 1976 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
1980 ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီဂျာမဏီကနေ ELECTROSTAR ကုမ္ပဏီထံမှစိုစွတ်သောခြောက်သွေ့လေဟာနယ်သန့်စင်၏နည်းစနစ်မိတ်ဆက်, အမေရိကန်, ဂျပန်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်ကနေစီးရီးမော်တာ၏အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများတင်သွင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာစီးရီးမော်တာ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရာတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီမှာဖြစ်ခဲ့သည်။
လေ့လာနေကျော် 10 နှစ်များအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများထဲကနေစုပ်ယူပြီးနောက်ကအောင်မြင်စွာမြင့်မားသောဖိအားအဝတ်လျှော်ဘို့စီးရီးမော်တာဖွံ့ဖြိုးအစားဧပြီလ 2000 ခုနှစ်တွင် 1999 ခုနှစ်တဦးတည်းတင်သွင်း, Longkou သာ. ကောင်း၏မော်တော် Co. , Ltd မှအောင်မြင်စွာပုဂ္ဂလိကခဲ့သည့်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည် ပူးတွဲ-စတော့ရှယ်ယာလုပ်ငန်း။ ကလည်းစက်တင်ဘာ 2005 ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ရှန်ဒေါင်း သာ. ကောင်း၏ Motor Co. , Ltd မှအမည်အားပြောင်းလဲပစ်